Ny biogas dia novokarina avy amin'ny fako zavamaniry manafika | Fanavaozana maintso
Ny biogas dia novokarina avy amin'ny residu zavamaniry manafika
Portillo Alemanina | | biogaz
Ankehitriny dia misy fomba maro hamoronana angovo amin'ny alàlan'ny fako isan-karazany. Ny fampiasana fako ho enti-mamokatra angovo dia fomba iray tsara hiarovana ny akora fototra ary hanamparana ny fiankinan-doha amin'ny lasantsy fosily.
Ny tanamasoandro meksikana dia heverina ho zavamaniry manafika any amin'ny faritra maro aty Afrika, Aostralia ary ireo nosy hafa ao amin'ny Oseana Pasifika. Eny, ireo mpikaroka avy amin'ny oniversite nizeriana roa dia niasa tamin'ny fanadihadiana izay mampiroborobo famokarana biogas sy fanatsarana ny fahombiazan'ny fambolena akoho amam-borona sy ireo tanamasoandro manafika ireo.
1 Miteraha biogas ary mampitombo ny fahombiazany
2 Fahombiazana lehibe kokoa amin'ny fitsaboana mialoha
Miteraha biogas ary mampitombo ny fahombiazany
Hevitra lehibe ny famokarana biogas avy amin'ny fako akoho amam-borona sy tanamasoandro any Mexico, satria olana roa lehibe no hiafarantsika: ny fitsaboana ny sisan'ny toeram-pambolena sy ny fandrahonana ireo karazana vazimba teratany nateraky ny tanamasoandro Meksikana. Talohan'izay, na any Nizeria na any Sina, dia nisy fikarohana natao hampiasaina io biogas io. Ny hevitra dia ny hanafoanana ny fanafihana an'io zavamaniry io any amin'ireo toerana izay mamindrany ny zavamaniry zanatany, satria samy mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo sy ny vondrona IUCN (Vondrona Iraisam-pirenena misimisy momba ny fiarovana ny natiora) no manondro fa mampidi-doza tokoa ireo tanamasoandro ireo amin'ny sasany. faritra voajanahary voaaro.
I Nizeria dia iray amin'ireo firenena voakasik'ity zavamaniry ity ary izany no antony tsy hijanonany mitady vahaolana hafa hanakanana ny fanitarana azy. Ho fanampin'izany, tsy vitan'ny hoe manakana ny zavamaniry fotsiny izy ireo fa manandrana mampiasa ny fako. Ny fanadihadiana notontosain'ny oniversite Landmark sy Fifanekena, navoaka tao amin'ny gazety Angovo sy solika, dia mampiseho fa ny sisan'ireo tanamasoandro ireo dia manana fahombiazana lehibe amin'ny famokarana biogas. Izany dia mitranga noho ny fiarahan'ny fandevonan'ireo voninkazo tanamasoandro meksikanina sy ireo sisa tavela amin'ny fiompiana akoho amam-borona taloha.
Fahombiazana lehibe kokoa amin'ny fitsaboana mialoha
Betsaka ny fomba famokarana biogas. Ny biogas dia azo ampiasaina hamokarana angovo satria manana sandan'ny kalorific avo io. Ny fanadihadiana dia nanadihady ny fitsaboana mialoha ny fako akoho amam-borona sy ny sisa tavela amin'ny voninkazo any Mexico mampitombo ny vokatra amin'ny famokarana biogas mihoatra ny 50%. Ny fehin-kevitry ny fandinihana dia taratry ny fitomboan'ny 54,44% amin'ny vokatra biogas izay avy tamin'ny andrana iray izay nanatanterahana ny fitsaboana mialoha ary nampitahaina tamin'izay mbola tsy voatsabo teo aloha.
Raha te hahalala raha manarona ny angovo ampiasaina amin'ny fitsaboana mialoha ny fahombiazana dia atao ny fandanjana angovo. Ao amin'ny fifandanjan'ny angovo, ny angovo miditra amin'ny rafitra dia dinihina, ary koa ny ilaina amin'ny fizotry ny famokarana biogas rehetra, ary ny angovo mamela ny rafitra dia refesina ihany koa. Amin'izany fomba izany dia voafehinao tanteraka ny famokarana sy ny fampiasana angovo amin'ny fotoana rehetra.
Eny, amin'ny fifandanjan'ny angovo izay notanterahina dia voamarika fa tsara ny angovo net ary ampy hanonerana tsara ny angovo mafana sy ny herinaratra izay nampiasaina hanatanterahana ny fitsaboana alohan'ny fitsaboana thermo-alkaline.
Tadidio fa mety misy atin'ny akoho amam-borona otrikaina, hormonina, antibiotika ary metaly mavesatra izay simba amin'ny tany sy anaty rano. Izany rehetra izany dia mety handoto ny tany sy ny rano amoaka azy ireo. Izany no antony maha-ara-drariny ny fampiasana ireny diky ireny amin'ny famokarana biogas, na dia marihina aza fa tsy mahasoa azy ireo ny manova azy ireo ho biogas. Mba hahomby kokoa dia tsy maintsy afangaro amin'ny akora legioma izy ireo, toy ny tanamasoandro meksikana.
Ary farany, misy zavamaniry manafika hafa any amin'ny firenen-kafa toa an'i Mexico na Taiwan izay kasain'izy ireo hamadika azy ireo ho lasa biofuel toy ny etanol ary ampiasaina ihany koa handinihana ny fampiasana biomethane.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Ny biogas dia novokarina avy amin'ny residu zavamaniry manafika
Hery mahery tsy misy fahatapahana amin'ny WaveStar
Angovo azo havaozina any Eropa, manao ahoana izy ireo?